CENO/Ouinet အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များ - Censorship.no! သုံးစွဲသူ လက်စွဲ
1.1. CENO ဘရောက်ဇာဆိုတာ ဘာလဲ။
1.2. Ouinet ဆိုတာ ဘာလဲ။
1.3. အမြန် စတင်မှု လမ်းညွှန်
1.4. မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
2. အဓိက အယူအဆများ
2.1. ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ။
2.2. အများသုံးနှင့် သီးသန့် ရှာဖွေမှု
2.3. CENO/Ouinet အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များ
2.4. CENO/Ouinet အသုံးပြုခြင်း၏ အန္တရာယ်များ
3. CENO ဘရောက်ဇာ အသုံးပြုခြင်း
3.1. CENO ထည့်သွင်းခြင်း
3.2. အများသုံး သို့မဟုတ် သီးသန့် ရှာဖွေမှုကို အသုံးပြုခြင်း
3.3. CENO ဆက်တင်များ
3.4. ဘရောက်ဇာ စမ်းသပ်ခြင်း
3.5. အခြားသူများအား ကူညီခြင်း
3.6. ပြဿနာ ဖြေရှင်းခြင်း
4. နောက်ဆက်တွဲ- Ouinet လက်ခံစက် သုံးစွဲသူ ကြားခံစနစ်
Censorship.no! သုံးစွဲသူ လက်စွဲ
CENO/Ouinet အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များ
အခြားရှောင်ရှားသည့် နည်းပညာများထက် CENO နှင့် Ouinet ကို အသုံးပြုခြင်း၏ အဓိက အားသာချက်များသည် အချင်းချင်း အသွားအလာ ထပ်ဆင့်ပို့ရန်၊ နောက်ပိုင်းတွင် အတည်ပြုရန်အတွက် အကြောင်းအရာကို လက်မှတ်ထိုးရန်နှင့် အခြားသူများထံ တင်ပို့ဖို့ လက်မှတ်ထိုးထားသော အကြောင်းအရာကို သိုလှောင်ရန် လက်ခံစက်များနှင့် ထိုးသွင်းဖိုင်များ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှ အရင်းခံသည်။ ဖော်ပြသင့်သော အားသာချက်အချို့မှာ -
ရင်းနှီးသော သုံးစွဲပုံ - CENO ဘရောက်ဇာ အသုံးပြု၍ ဝက်ဘ်အကြောင်းအရာကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲခြင်းသည် သင်သုံးနေကျ ဘရောက်ဇာတွင် ဝက်ဘ်ကို ရှာဖွေကြည့်ခြင်းနှင့် အလွန်တူသည်ဟု ခံစားရပြီး လုံးဝ ပိတ်ဆို့ခံရသည့် အချိန်တွင်ပင် အလားတူ ခံစားရသည်။ လူကြိုက်များသော အကြောင်းအရာအတွက် စိတ်ကြိုက်လင့် အသစ်များ သို့မဟုတ် (အက်ပလီကေးရှင်းများ အကြား ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းကဲ့သို့) သုံးစွဲသူဘက်မှ အထူး လုပ်ဆောင်ချက်များ မလိုအပ်ပါ။
အကြောင်းအရာ ရရှိနိုင်မှု တိုးလာခြင်း - Ouinet သည် ကွန်ရက် ကြားဝင်နှောင့်ယှက်မှု လွန်ကဲသော အခြေအနေများတွင် လျင်မြန်ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်ရသော နည်းလမ်းဖြင့် အကြောင်းအရာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ အချို့သော အကြောင်းအရာကို ပိုမိုလူကြိုက်များလာလေလေ ၎င်း၏ မိတ္တူများကို CENO/Ouinet လက်ခံများက ပိုမိုတင်ပို့လေလေဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ပိုမိုရရှိနိုင်လေလေ ဖြစ်သည်။လက်မှတ်ထိုးထားသော အကြောင်းအရာကို ချိတ်ဆက်မှု ဖျက်ထားသော ဧရိယာရှိ အချို့သော လက်ခံစက်များထံ အော့ဖ်လိုင်း နည်းလမ်းများ (ဥပမာ - USB ဒရိုက်ဗ်) ဖြင့် ယူဆောင်လာခြင်းအားဖြင့် အခြား လက်ခံစက်များအတွက် ရရှိနိုင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပိုမိုမြန်ဆန်သော ရှာဖွေခြင်း - သင့်လက်ခံစက်သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် များစွာသော လက်ခံစက်များထံမှ တူညီသော အကြောင်းအရာ၏ ကွဲပြားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်ထုတ်နိုင်သောကြောင့် အကြောင်းအရာ ပို့ဆောင်ခြင်း ဝန်ကို ကွဲပြားသော ကွန်ရက်များနှင့် စက်များအကြား ဖြန့်ချိထားသည့်အတွက် လက်ခံစက်တစ်ခုတည်းသို့ သွားသည့် လမ်းများတွင် ပိတ်ခြင်းကို (အထူးသဖြင့် ဗီဒီယိုကဲ့သို့ ကြီးမားသော ရင်းမြစ်တစ်ခုကို ပို့ဆောင်ချိန်တွင်) ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ယင်းသည် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ ကန့်သတ်ချက်ရှိသည့် အချိန်တွင်သာမက ထုတ်ဝေသူများအနေနှင့် ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာအချို့ အလွန်လူကြိုက်များလာသည့် အချိန်တွင် မူလ ဆာဗာများ၌ ရင်းမြစ် သုံးစွဲမှု အလွန်မြင့်တက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အတွက်ပါ အသုံးဝင်သည် (၎င်းကို ဆလက်ရှ်ဒေါ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဟု ခေါ်သည်)။
ပိုမိုဈေးချိုသော ရှာဖွေခြင်း - မူလ ဆာဗာက ပြည်ပတွင် ရှိသည့်တိုင်အောင် တိကျသော ဒေသတစ်ခုတွင် လူကြိုက်များသော အကြောင်းအရာသည် ထိုဒေသရှိ CENO/Ouinet လက်ခံစက်များတွင် ကူးယူခံရလေ့ရှိသည်။ သင်သည် ထိုအကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်စားပါက သင့်လက်ခံစက်သည် ၎င်းကို သင့်ဒေသရှိ အခြားလက်ခံစက်တစ်ခုခုမှ ရယူကောင်းရယူနိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာ အသွားအလာသည် ဒေသတွင်း အသွားအလာထက် ပိုမိုဈေးကြီးသော နိုင်ငံအချို့တွင် (ဥပမာ - နိုင်ငံတွင်းသုံး အင်ထရာနက် ရှိလျှင်) ယင်းကြောင့် သင် အမှန်တကယ် ငွေချွေတာနိုင်သည်။